पाँचथरमा ६६.५ प्रतिशतको मात्र खोप कार्ड, अब सरकारी सेवा लिन जाँदा खोप कार्ड नभए के हुन्छ ?
सरला रेग्मी ( पाँचथर)। सरकारले माघ सात गते देखि सार्वजजिक सेवा लिन र सार्वजनिक ठाउँमा हिड्न समेत खोप कार्ड देखाउनु पर्ने नियम लागु गरेको छ । पाँचथरमा पनि अब सरकारी सेवा लिन र सार्वजनिक ठाँउमा हिड्डुल गर्न खोप कार्ड देखाउनु पर्ने हुन्छ । शुक्रबार बसेको डिसिएमसी पाँचथरको बैठकले सार्वजनिक स्थल, बित्तीय संस्था तथा सरकारी कार्यलयमा सेवा लिन जादा खोप कार्ड अनिवार्य गरेको हो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नेतृत्वमा पुस २७ गते बसेको बैठकले माघ ७ गतेबाट सार्वजनिक स्थलमा हिँडडुल गर्न खोपकार्ड अनिवार्य गरेको हो । सोहि अनुसार पाँचथरमा पनि खोप कार्ड लागु गरिएको हो ।
२०६८ सालको जनसंख्या अनुसार १९१८१७ जनसंख्या रहेको पाँचथरमा स्वस्थ्य कार्यालयको तथ्याङ अनुसार करिब ६६.५ प्रतिशतले मात्र पुर्ण खोप लगाएका छन् । बाँकी ३३.५ प्रतिशत जनसंख्याले अझै खोप लगाउन बाँकीनै छ । स्वास्थ्य कार्यालय पाँचथरको तथ्याङक अनुसार जिल्लामा कोभिसिल १३ हजार ५ सय ५९ जना, भेरोसेल ५६ हजार ७ सय ७५, १२ देखि १७ बर्षका बालबालिकाले १८ हजार, एस्ट्रोजेनिका १३ हजार १ सय २४ जनाले खोप लगाएका छन् । जम्मा ९८ हजार ७ सय ३८ खोप लगाएका हुन् । करिब ६६.५ प्रतिशतले मात्र पुर्ण खोप लगाएका छन् भने बाकी ३३.५ प्रतिशतले कोरोना बिरुद्धको खोप लगाएका छैनन् ।
अब लागु भएको नियम खोप कार्ड नहुने वा खोप नलगाएकाहरुले अब के सरकारि सेवा लिन नपाउने हुन् त ? यो प्रश्न गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्याैपानेले भने ‘ सरकारी सेवा लिन जाँदा खोप कार्ड नभए पहिला खोप लगाउन पठाउने अनि मात्र सरकारी सेवा दिने बताएका छन् ‘। उनले भने “१८ बर्ष देखि माथिका सबै उमेर समुहका प्रत्येक नागरिक खोप तथा बुष्टर डोज दिन स्वास्थ्य कार्यलय लाई निर्देशन दिएका छौं ।” त्यसैले खोप कार्ड सरकारी सेवा लिन जाँदा होस या सार्वजनिक स्थल हिडडुल गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गरिएका उनले बताए ।